कामरेड बामदेवको राजनीति अवसान | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कामरेड बामदेवको राजनीति अवसान
‘प्रधानमन्त्री’को बिष हालेको ललिपोप खान प्रचण्ड-माधव नेपाल मोर्चाबाट हठात् बाहिरिए पछी अब बामदेव के गर्लान ? ओलिले साँच्चै प्रधानमन्त्री बनाउलान् त ? यसको उत्तर जटिल छ।
बैशाख २२ गते, २०७७ - १७:३० मा प्रकाशित
मैनाली समसामयिक विषयमा तिखो कलम चलाउँछन् । युवा लेखक मैनाली विभिन्न संचारमाध्यममा नियमित लेख्ने लेखक हुन् ।
भनिन्छ ईतिहास दोहोरिदैन। मात्र केही संयोगहरु मिल्न जान्छन् । तर बामदेव गौतमको हकमा के भएको हो यसै...